Taageero farsamo - Beijing Zohonice Qalabka Qurxinta Co., Ltd.
Kooxdayada Taageerada Farsamada ayaa kuu haysa talaabo kasta oo aad kula socoto adeeg aad u sareeya oo jawaab celis ah oo loogu talagalay in lagu hubiyo hawlgalka maalinlaha ah ee teknoolojiyada daaweyntaadu had iyo jeer ku socoto waxqabadka ugu sarreeya. Taageeradayada farsamo waxay sidoo kale la micno tahay inaan kugu soo koobnay dhacdada dhifka ah ee cillad farsamo ay jirto, taas oo kuu suurta gelinaysa inaad si caadi ah ula socoto ganacsiga iyo carqaladeynta ugu yar ee maalintaada. Hadaadan waligaa hubin talaabooyinka aad kaqaadayso qalabkaaga bilicsanaanta, kaliya wac kooxdayada - markasta waxaan u joognaa inaan ku caawino.
Faa'iidooyinka taageerada farsamada
Helitaanka taageerada telefoonka ku saleysan Melbourne
1. Injineerada maxalliga ah ee gacanta ku haya si ay uga caawiyaan Australia ballaaran
2. Isla maalin dirista qalabka amaahda
3. Helitaanka dejinta iyo xalinta dhibaatada Hagayaasha fiidiyowga
4.Spare qaybaha helitaanka qaybaha
Ku shaqeynta ganacsi qurux badan oo qurux badan ma ahan wax yar oo la yimaada qaybtiisa farxadeed, iyo sidoo kale caqabadaha. Adeeggeena daryeelka caafimaad ee ugu fiican ayaa ah habka aan kaaga caawineyno inaad si habsami leh u maamusho hawl maalmeedka saloon, isboorti, rug caafimaad ama tababar halka culeys yar uu ka maqan yahay, soosaarka maqnaanshaha maxi iyo hubinta hababka daaweynta in lagu fuliyo si xirfad leh oo wax ku ool ah. Hadday jirto maalin uun oo aad madaxaaga uun ka dareemayso. maxaad ugu wici weyday kooxdayada taageerada kiliinikada xoogaa talo bixin khabiir ah?
1. Taakulayn warshadeed oo tayo leh oo laga heli karo taleefan iyo emayl.
Borotokoollada daaweynta ee habsami u socodka howlahaaga bilicsanaanta
3. Helitaanka foomamka la-tashiga, foomamka oggolaanshaha iyo waxbarashada bukaanka
4. Helitaanka waraaqaha cilmi-baarista caafimaadka iyo hagitaannada fiisiyoolajiga maqaarka
5.U adeegso fiidiyowyadayada taageerada, hababka daaweynta iyo waxyaabo kaloo badan
At The Zohonice Beauty Co.Ltd., Waxaan ku darnaa barnaamij tababar oo heer caalami ah oo dhameystiran lana soo iibsiga qalabkaaga ha ahaado mashiinka IPL. YAG Laser ka qaadista ama qalabka timaha laysarka looga saaro. Tani waxay tahay in la hubiyo inaad kacdo oo aad la socoto kalsooni markaad fulineyso daaweyntaada bilicsanaanta cusub, taasoo kuu oggolaaneysa inaad gaarsiiso adeegga ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee macaamiishaada taas oo iyaduna horumarisa daacadnimo badan oo macaamiil ah isla markaana faa'iido fiican uga soo baxdo ganacsigaaga isla markiiba iyo muddada dheerba orod.
Faa'iidooyinka tababarka qalabka
1.Baraamku wuxuu daboolayaa aragti. tababar la-talin ah
2. Wax ka baro tababarayaasheena aqoonta sare u leh xirfadahooda
3. Ku raaxayso barashada xarumaheena tababarka casriga ah
4.Cadeynta kaqeybgalka ee la bixiyo marka la dhameystiro
5. fadhiyada dib u habeynta oo loo heli karo sii wadida heerarka adeegga
Taageerada suuq geynta
Oo ay la socdaan tababar qalab xirfadeed iyo taageero farsamo oo socota. Waxaan dareemeynaa in ereyga lagaa siiyo daaweyntaada quruxda badan ee cusub sidoo kale waxay muhiim u tahay guusha iyo koritaanka ganacsigaaga qurxinta. Tani waa sababta aan ugu darno suuq-geyn dhameystiran iyo taageero dhiirrigelin qalab kasta oo la iibsanayo. Kheyraadkeenu wuxuu ku kooban yahay wax kasta oo ka yimaada dallacsiinta Facebook illaa qalabka ogeysiinta ee gudaha. Dabcan, kooxdayada suuqgeyntu waxay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan haddii aad waligaa u baahato talo ku saabsan sida loo hubiyo in meheraddaadu ka dhex muuqato dadka badan.
Waxtarka taageerada suuqgeynta
1. Helitaanka boodhadhka. buugaagta yar yar, tusaalooyinka xaashida waraaqaha iyo maktabadaha sawirada
Isticmaal ololeyaal emayl loo diyaariyey oo gogol xaar ah iyo waxyaabaha ku jira websaydhka
Hagayaasha warbaahinta bulshada iyo waxyaabaha ku saabsan maxi oo ka maqnaanaya soo-gaadhistaada internetka
4. Helitaanka menusyada daaweynta, hagayaasha qiimaha iyo dhibcaha hadalka macaamiisha
5. Moodhadhka sawirrada kahor iyo kadibba. fiidiyowyo xayeysiis ah iyo waxyaabo kale oo badan